ကရင် – စာမျက်နှာ2– Ministry of Union Government Office
မြဝတီမြို့နယ်ရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအတွက် စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ​ထောက်ပံ့မှု
၁၂.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၉:၀၀)နာရီမှ စ၍ ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီခရိုင်၊ မြဝတီမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအတွက်အိမ်ထောင်စု တစ်စုလျှင် အ​ခြေခံစားသောက်ကုန်(၅)မျိုးအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိန်ဗိုလ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန့်ဇင်အောင်နှင့် ဦးအိုက်ကျန်ခမ်း၊ ခရအမှူး ဦးတေဇာအောင်၊ မနအမှူး ဦးဖြိုးဇော်ကိုကို နှင့် အခြေခံစားကုန်(၅)မျိုး မြို့နယ်အဆင့်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်ကျေးအဆင့်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တို့မှ ယင်းအတွက် အိမ်ထောင်စု(၁၁၀၀)စုတို့အား အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လံဝေငှပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် CBFQ ထားရှိမှု
(၁၂.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့ ဘုရားသုံးဆူမြို့ နယ်စပ်ဂိတ်မှ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးမှနေရပ်ပြန် မြန်မာနိုင်ငံသား(၉၂)ဦးအား အ.ထ.က(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး) နှင့် မူလွန်(၅)မြို့မ (Community Based Facility Quarantine Center)တို့တွင် Quarantine ထားရှိထားပါသည်။
လိပ်သိုမြို့ နေရပ်ပြန်များထားရှိသည့် CBFQC အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း
ကရင်ပြည်နယ်၊ သံ​တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှ လိပ်သိုမြို့ နေရပ်ပြန်များထားရှိသည့် CBFQC အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
သံ​တောင်ကြီးမြို့နယ်ရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအတွက် စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ​ထောက်ပံ့မှု
၁၂-၄-၂၀၂၀ရက်​နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံခရိုင်၊ သံတောင်ကြီးမြို့နယ် ၊လိပ်သိုမြို့၌ ပြည်သူ့လွှတ်​တော် ၊အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မြို့မိမြို့ဖ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှ လက်လုပ်လက်စားများအား အခြေခံစားကုန်များထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ဖာပွန်မြို့နယ်ရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအတွက် စား​သောက်ကုန်၅မျိုး ​ထောက်ပံ့မှု
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်ခရိုင်၊ဖာပွန်မြို့တွင်ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောအိမ်ထောင်စုများအား တတိယနေ့အဖြစ် အိမ်ထောင်စု(၃၀၅)စုအားအခြေခံစားကုန်(၅)မျိုး ထောက်ပံ့ခြင်းကိုနံနက်(၀၈၀၀)ချိန်ဒုတိယခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမျိုးအောင်၊အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုင်းသန်းနိုင်၊မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးညွန့်ဦး၊မြို့မိမြို့ဖများနှင့် ခရိုင် မြို့နယ်(covid-19)ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဖြင့်အဖွဲ့(၃)ဖွဲ့ခွဲ၍လည်းကောင်း၊ ကမမောင်းမြို့အတွင်းအိမ်ထောင်စု(၈၁၄)စုအားခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဇော်ဇော်ဦး၊မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်မျိုးသန့်၊မြို့မိမြို့ဖများ၊(Covid-19)ကော်မတီများဖြင့်အိမ်ထောင်စု(၈၁၄)စုအတွက်အဖွဲ့( ၄)ဖွဲ့ခွဲကာ( ၀၈၀၀)ချိန်မှစတင်၍တစ်အိမ်တက်ဆင်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရာ( ၁၂၀၀)ချိန်တွင်ပြီးစီးခဲ့ပြီးဖာပွန်ခရိုင်အတွင်းတတိယနေ့အဖြစ်အိမ်ထောင်စုစုစုပေါင်း(၁၁၁၉)စုအားထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ (၁၃-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင်ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်း အိမ်ထောင်စု(၇၈၈)စုအား နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ် ဆက်လက်ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
​ကော့ကရိတ်မြို့နယ် စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ​ဖြန့်​ဝေမှု
————————————————— (၁၂-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၀၉:၃၀)နာရီအချိန်တွင် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင် အခြေခံစားသောက်ကုန်(၅)မျိုးအား ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌ ဒေါ်နန်းသူဇာဝင်းမှ ဦးဆောင်၍ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဆန်းနု၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့များ၊ မြို့နယ် COVID-19ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်မိရပ်ဖတို့မှ ယနေ့တွင် ကော့ကရိတ်မြို့၊ အမှတ် (၂)ရပ်ကွက်ရှိအိမ်ထောင်စု (၃၀၇)စုအနက်မှ ကျန်ရှိသောအိမ်ထောင်စု (၁၅၇)စုတို့အတွက် အိမ်တိုင်ရာရောက် ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါသည်။
လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ဖြန့်​ဝေမှု
ဘားအံခရိုင်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်သတင်း ………………………………………………. ၁၂.၄.၂၀၂၀ရက်နေ့၊ (၀၈၀၀)နာရီအချိန်တွင် လှိုင်းဘွဲမြို့၊ (ခ)ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောအခြေခံလူတန်းစား အိမ်ထောင်စု (၁၆၄)စုအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ထောက်ပံ့သည့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ချို၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစောချစ်ဦး၊ မြို့နယ်အဆင့် Covid-19ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ မြိုနယ်အုပ်ချပ်ရေးမှူး ဦးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီဝင် ဌာနဆိုင်ရာများမှ အိမ်တိုင်ရာရောက်လိုက်လံထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။
မြဝတီမြို့နယ်အတွင်း စား​သောက်ကုန်၅မျိုး ​ထောက်ပံ့မှု
၁၁.၄..၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၉:၀၀)နာရီမှ (၁၂၀၀)နာရီအထိ မြဝတီမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အိမ်ထောင်စု တစ်စုလျှင် အ​ခြေခံစားသောက်ကုန်(၅)မျိုးအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိန်ဗိုလ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန့်ဇင်အောင်နှင့် ဦးအိုက်ကျန်ခမ်း၊ ခရအမှူး ဦးတေဇာအောင်၊ မနအမှူး ဦးဖြိုးဇော်ကိုကို နှင့် အခြေခံစားကုန်(၅)မျိုး မြို့နယ်အဆင့်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်ကျေးအဆင့်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တို့မှ ယနေ့အတွက် အိမ်ထောင်စု(၁၁၅၀)စုတို့အား အခအိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လံဝေငှပေးခဲ့ပါသည်။
လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် အတွင်း စား​သောက်ကုန်၅မျိုး​ ထောက်ပံ့မှု
ဘားအံခရိုင်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်သတင်း ………………………………………………. ၁၁.၄.၂၀၂၀ရက်နေ့၊ (၀၉၀၀)နာရီအချိန်တွင် လှိုင်းဘွဲမြို့၊ (က)ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောအခြေခံလူတန်းစား အိမ်ထောင်စု (၂၀၀)စုအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ထောက်ပံ့သည့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ချို၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစောချစ်ဦး၊ မြို့နယ်အဆင့် Covid-19ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ မြိုနယ်အုပ်ချပ်ရေးမှူး ဦးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီဝင် ဌာနဆိုင်ရာများမှ အိမ်တိုင်ရာရောက်လိုက်လံထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။
၁၁-၄-၂၀၂၀ ရက်​နေ့တွင် ဘားအံခရိုင် ၊ ဒုတိယခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊အမျိုးသားလွှတ်တော်၊မြို့နယ်ဋ္ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်သံတောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များရှိ လက်လုပ်လက်စားများအားစားနပ်ရိက္ခာများထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။